Zezika | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny Compost dia diloilo voajanahary azo avy amin'ny fatran'ny zavamaniry organika samihafa eo ambany fiantraikan'ny micro-organismes. Manatsara ny tany rehetra izany: Ny tanimanga dia mampihena azy bebe kokoa, ary ny sandany dia afaka manangona ny fahamendrehana. Kitapo feno takelaka amin'ny tananao manokana. Ilaina ny mitady toerana ao anaty sombin-tany izay tsy mamafy na mamafy na inona na inona, izay misy tany tsy misy.
Ny endriky ny fanaovana komposty no manao izany
Ny tantsaha sy ny mpamboly dia nitady fomba rehetra hampitomboana ny fijinjana, satria tena lafo sy sarotra ny fampiasana ny menaka organika. Ireo mpangotraka mineraly dia lasa mora kokoa, manome vokatra avo lenta izy ireo, saingy aorian'ny fotoana dia hitan'ny tompon'ireo teboka fa miharatsy ny tany: lasa maivana, sarotra, sandany ary tsy mitambatra.
Mamboly sy mikarakara tsara ny kakazo isika
Ny Cacti dia lasa malaza kokoa amin'ny fambolena ao an-trano. Ny zavamaniry dia tsy mendri-piderana amin'ny fikarakarana sy ny fihenan'ny hain-trano, na dia manadino ny rano aza ianao, dia tsy hahatsapa ny tsy fahasalamana ny cactus. Ny fomba hifidianana cactus Misy ny maro amin'ireo mpamboly be mpahandro sy tiavo indrindra indrindra ho an'ny toeram-ponenana.
Ny tombontsoa amin'ny fampiasana ny tsimokaretin'ny voankazo dia "Overy"
Ny fanontaniana mikasika ny fomba hampitomboana ny fambolena amin'ny zavamaniry zaridaina dia mbola manan-danja eo amin'ny tontolo maoderina. Zava-dehibe indrindra ho an'ny mponina amin'ny fahavaratra izay tsy afaka mirehareha amin'ny fahavokarana ny tany sy ny isan'ny mpangoron-drano maro. Noho izany, ato amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny zava-mahadomelina izay afaka mamporisika ny fananganana ny ovaire sy hampitombo ny vokatra, izany hoe ny Ovandrana Universal sy torolàlana amin'ny fampiasana azy.
Ahoana ny fampiasana superphosphate amin'ny fambolena
Ny olona rehetra izay mitombo amin'ny zavamaniry dia mahafantatra fa tsy misy akanjo, tsy hisy vokatra, tsy fihinana azo hanina, na fambolena firavaka. Ny zavamaniry dia tsy ampy sakafo ao anaty tany, ankoatra izay, tsy ny sakafo rehetra no mahasalama, noho izany dia mila fanampiana ny fanampiana amin'ny voankazo. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny superophosphate, ny fampiharana sy ny fananana.
Ny fampiasana ny nitrita kalium ao an-jaridaina sy ao an-jaridaina
Ny zavamaniry, indrindra fa ireo izay miaina any amin'ny tany mahantra, dia mila sakafo ampy mba hitombo sy hivoatra araka ny tokony ho izy. Manampy ny fambolena mora kokoa ny mangatsiaka ny andro mangatsiaka sy mangatsiaka, ny kalazo dia ilaina amin'ny voninkazo rehefa maniry. Iray amin'ireo oto-mineraly ireo ny nitrile ny potassium.
Nitroammofosk: ny toetra, ny fampitahana, ny fampiharana
При выращивании любых сельскохозяйственных культур и плодовых деревьев без подкормок не обойтись. Обильность урожаев зависит от целого ряда факторов, но питательность почвы находится далеко не на последнем месте. Ny iray amin'ireo nalona malaza sy mahomby indrindra dia nitroammofoska - zezika iray tena mandaitra mahomby izay ahitana singa telo ilaina: stickogen, phosphorus ary potassium.
Ny voka-dratsin'ny habetsaky ny humus, ny voka-dratsin'ny hatsambikin'ny tany
Ny zaridaina rehetra sy ny zaridaina rehetra dia mahafantatra ny voka-dratsin'ny tany, ny maha-zava-dehibe azy dia ny fambolena avo be sy ny zavamaniry maitso ao amin'ny zaridaina. Maro koa aza no nanao ny famokarana tsy miankina. Na izany aza, ny mpamboly sy ny mpamboly dia tsy mahatakatra izay lazaina foana, fa maninona no mila an'ity ampahany amin'ny tany ity, ny vokatr'izany ary ny toerana hahazoana izany.
Toromarika momba ny fampiasana biohomus
Ny fijinjana tsara sy ny fampiroboroboana ny zaridaina sy ny zaridaina an-jaridaina dia tsy azo atao raha tsy mihinana foana. Ankoatr'izay, ilaina ny manomboka ity dingana ity mialohan'ny fambolena (eo amin'ny dingan'ny fanosehana ny masomboly) ary manohy tsy tapaka. Araka ny fantatrao, ny mineraly dia mineraly sy organika, ny roa amin'ireo karazana ireo dia ilaina ihany koa ho an'ny zavamaniry.
Teknolojia fampiharana orkide organika "Signat Tomato"
BIO VITA, organsy mena "Signor Tomato", dia miorina amin'ny sakafo tsara indrindra ho an'ny voatabiha sy tsaramaso. Diniho ny fampitahana, ny tombontsoa amin'ny fampiasana sy ny fomba fiasan'ity zava-mahadomelina ity. Ny singa, ny votoaty mivaingana sy ny famoahana "Signat Tomato" - fingotra organika, izay misy vaksiny maro: nitroka, potassium ary phosphorus ao anatin'ny 1: 4: 2.
Ireo endri-javatra sy tombontsoa azo avy amin'ny zavamaniry "Kemira" ("Fertika")
Kemira dia ampiana mineraly ahitana rakitra bitika sy macronutrients ho an'ny karazana zavamaniry sasany. Ny antontan-taratasy fangatahana dia be dia be: ampiasaina amin'ny zaridaina, zaridaina ary asa fambolena. General Description Ny fanafody "Kemira" ("Fertika") dia aseho amin'ny endriky ny fanafody mineraly.
Ny fampiasana ny nitrophoska mpanafana amin'ny vokatra samihafa
Nitrophoska - tsiranoka avy amin'ny nitrogen-phosphorus-potassium, izay ampiasaina hampitombo ny fambolena amin'ny zaridaina sy zaridaina rehetra. Amin'izao fotoana izao isika dia hiresaka momba ny lazan'ny nitrophosphate sy ny fananany, ary koa manoratra ny tahan'ny fampiharana amin'ny zavamaniry isan-karazany. Fanangonam-bokatra sy famoahana fiasa Mifototra amin'ireo voalaza etsy ambony ireo, dia miharihary fa ny fanafody nitritrosan'ny nitrophosphate dia ahitana singa telo lehibe ao anatin'ireto fanafody manaraka ireto: nitroka - 11%; phosphorus - 10%; potassium - 11%.
Ny fampiasana ody amonton-dranom-boasary potassium ao amin'ny zaridaina
Ho an'ny fampandrosoana ara-dalàna ny zavamaniry rehetra, ilaina ny fatran'ny sakafo telo: sticky, phosphor ary potassium. Ny nitroka manampy amin'ny fitomboany sy ny voankazo, ny fosafosa dia manatsara ny fandrosoana, ary ny potasy dia manampy ireo zaridaina mba handresy ny adin-tsaina amin'ny endrika toe-javatra ratsy, hiatrehana aretina, hitondra voly tsara sy maharitra ela.
Fanaovan-jiro "Kalimagneziya": famaritana, fanangonana, fampiharana
Ny fampiasana ara-dalàna ny "Kalimagnezii" ao an-jaridaina na ao an-jaridaina dia manampy amin'ny fitomboan'ny fahavokarana ary mampitombo ny toetra mampiavaka ny vokatra. Ny tena fikarohana momba an'io zavatra io dia ny zavamaniry mangahazo sy ny mahantra, ny tany mahavokatra. Inona no atao hoe zezika "Kalimagneziya", inona ny tolo-kevitry ny mpanamboatra ao amin'ny torolàlana, rehefa ilaina izany ary amin'ny dingana tokony hampiasana izany - dia ho hitanao ny valin'ireo fanontaniana ireo ao amin'ny lahatsorantsika.
Ny fampiasana ny nitrate calcium ho toy ny zezika
Ny nitrify kalsi dia matetika ampiasaina amin'ny fambolena, toy ny fiakarana ambony amin'ny zavamaniry, legioma ary voankazo. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ireo toetra mahasoa azo avy amin'ny nitrate calcium isika, ary diniho ny torolalana fohy momba ny fampiasana azy. Ny nitrify kalsioma: ny firafitry ny diloilo Ny firafitry ny diloilo dia ny kalcioma mivantana, izay mitentina manodidina ny 19% amin'ny totalin'ny singa rehetra.
Ahoana ny fomba fampiharana ny "Gumat 7"?
Ny mpamboly rehetra dia te-haka vokatra tsara avy any am-pandriany, ary tsy misy dikany izany, trondro kely kely dacha, misy ovy sy kôkômbra nambolena eo, na saha lehibe. Koa satria efa simba tanteraka ny tany, dia tsy azo atao ny mampitombo ireo zavamaniry salantsalany tsy misy fitafy ambony. Izany no antony ampiasaina ny fofona voajanahary "Gumat + 7 Iodine".
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Zezika